Ungayikhetha njani inqanaba lakho leselula. Iingcebiso kunye nokusonjululwa kwamathandabuzo | Amadoda aQinisekileyo
Uyikhetha njani inqanaba lakho leselula
IsiJamani sasePortillo | | Te knoloji
Namhlanje wonke umntu uneselfowuni. Baye baba sisixhobo esibalulekileyo kubo bonke abo bafuna ukunxibelelana. Kwaye indlela yokunxibelelana itshintshe kakhulu okoko kwafika ii-smartphones kunye nokuphuculwa kwetekhnoloji. Injalo into yokuba iinkampani ezihambayo azisabaniki kuphela amaxabiso ezaphulelo kwiifowuni, kodwa ikwazisa nokusetyenziswa kwee-megabytes ze-intanethi. Ngokuqinisekileyo ngaphezu kwesihlandlo esinye izinga mobile ekupheleni kwenyanga.
Ke ngoko, siza kunikezela eli nqaku ukuba likufundise indlela yokukhetha inqanaba lakho leselula.
1 Iimfuno zakho kuqala
2 Imiba ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa ukhetha izinga lokuhamba
2.1 Ezizimeleyo okanye ezizimeleyo
2.2 Ikhadi okanye umsebenzisi wekhontrakthi
2.3 Sebenzisa loo nto uza kuyinika iselfowuni
2.4 Intsha eshukumayo okanye utshintsho lwenkampani
3 Eminye imiba ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa ukhetha inqanaba leselula
Iimfuno zakho kuqala
Into yokuqala ekufuneka uyiqwalasele xa ukhetha ireyithi yefowuni ziimfuno zakho. Ukuba ungomnye wabantu abafowunela okuninzi emnxebeni, iya kulungela wena onikezela ngemizuzu yasimahla okanye iifowuni ezingenamda. Ukuze wazi kakuhle ukuba zeziphi iimfuno zakho, kuya kufuneka uhlalutye ngononophelo ukusetyenziswa kweebhili ezihambahambayo. Kuya kufuneka uhlalutye singakanani imizuzu esiyichithayo, i-intanethi megabytes okanye imiyalezo ebhaliweyo.
Enye into ekufuneka uyiqwalasele kukuba uza kufumana iselfowuni entsha okanye uyasebenza. Kule meko, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ezinye izinto xa ukhetha ireyithi. Ukukhetha ireyithi eshukumayo inzima. Zonke iinkampani zibonelela ngezibonelelo ezithile ezinokukubhida. Kuya kufuneka ujonge ngokusondeleyo umnikelo ngamnye kwintengiso kwaye uthathele ingqalelo usetyenziso oza kulunika lona. Ngale ndlela, siyakwazi ukwandisa iindleko esiza kuzenza.
Omnye wemisebenzi eyenziwayo yokwazi ukuba uluhlobo olunjani lomsebenzisi kukuphendula imibuzo ethile. Le mibuzo yile:
Ungumsebenzisi wabucala okanye ozimeleyo.
Uya kuba likhadi okanye umsebenzisi wesivumelwano.
Uya kuyisebenzisa njani ifowuni?
Ukuba uza kufumana iselfowuni entsha okanye uza kutshintsha iinkampani.
Kuxhomekeka kwimpendulo yale mibuzo, uya kuba nakho ukwazi ngcono ukuba yintoni iprofayile yakho. Siza kubahlalutya ngokweenkcukacha ezingaphezulu.
Imiba ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa ukhetha izinga lokuhamba
Ezizimeleyo okanye ezizimeleyo
Ukuba uziqeshile kwaye usebenza wedwa, kuyacetyiswa ukuba ukhethe ezinye izibonelelo ezenzelwe ngokukodwa abo bazisebenzelayo. Ezi ntlawulo zithathela ingqalelo ukuba, ngesiqhelo, uya kuhlala unxibelelana rhoqo nabathengi, amaqabane okanye abathengisi. Oku kwenza inqanaba leselula Yenzelwe ukuba ikwazi ukwandisa i-invoyisi kunye neefowuni. Zininzi izibonelelo zabantu abazisebenzelayo kwaye ukhetho lwalo lubaluleke kakhulu xa kuziwa ekongeni kwibhili yakho yefowuni.
Ikhadi okanye umsebenzisi wekhontrakthi
Namhlanje bambalwa abantu abasasebenzisa ikhadi kwaye kufuneka bonyuse imali yabo eseleyo. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ukhethe ngobulumko phakathi kweentlobo zeekhontrakthi osinike zona. Kuya kufuneka ukhethe kakuhle ukuba yeyiphi na into oza kuyisebenzisa ngokomyinge ngenyanga kwaye uyihambise kubuncinci ekufuneka uyihlawule nokuba awusebenzisi zonke iinkonzo ezibandakanyiweyo kumgangatho wokuhamba.
Sebenzisa loo nto uza kuyinika iselfowuni
Kuxhomekeke kusetyenziso oza kulinika iselfowuni, uya kudinga inqanaba elinye okanye elinye. Ukuba ungomnye wabo bahlala betsalela umnxeba umnxeba, uya kudinga inqanaba leselula elinemizuzu yasimahla okanye engenamda. Olu hlobo lwabantu kunomdla kakhulu ukuqesha ireyithi ethe tyaba, ukusukela oko ukusekwa kweefowuni kuhlala kufakiwe, ke kuya kufuneka ungakhathazeki ngokuba ityala lakho liya kwandiswa ngokwenza iifowuni ezininzi.
Kukwakho nabantu abadla ngokufowuna rhoqo kodwa bexeshana elifutshane. Kulapho unomdla khona kwezo ntlawulo zibandakanya ukusekwa komnxeba. Ukuba ungomnye wabo batsalelayo umnxeba kwaye iifowuni zinde, uya kuba nomdla wokuba nemizuzu yasimahla okanye iifowuni ezingenamda. Enye into ebalulekileyo yile khetha abantu obatsalela umnxeba rhoqo. Kwaye zininzi iinkampani ezihambayo ezinikezela ngeefowuni nge-0 iisenti ngomzuzu kwaye ngaphandle kokusekwa kweefowuni kwabo basebenzisi benkampani enye.
Ukuba kwelinye icala ungomnye wabantu abasebenzisa kuphela iselfowuni kwi-intanethi, kuyafuneka ukuba uqeshe inqanaba eline-GB eyaneleyo yokuhamba. Kukho amaxabiso eselfowuni apho ungathenga khona iibhonasi ezingaphezulu ukuze uqhubeke nokuba nesona santya siphezulu sigqibe yonke i-GB ongene kuyo.
Intsha eshukumayo okanye utshintsho lwenkampani
Ukuba uza kuthenga iselfowuni entsha kukho izithembiso ezininzi ezikwinqanaba leselula. Ngokwesiqhelo ezi zibonelelo zikhatshwa iifowuni ezingabizi kakhulu, ukwanda kweigig kwirhafu, ukusekwa kweminxeba yasimahla, iiyure ezingabizinjl. Kulapho kubalulekile ukuba wazi ukuba ungumntu onjani ukuze ukwazi ukuziqhelanisa nesithembiso esikufanelayo.
Kwelinye icala, ukuba ungomnye wabo batshintsha inkampani kukwakho nokunikezelwa okuhle. Ezi zibonelelo zikhatshwa sisivumelwano esiselfowuni esihlala sihamba kunye nefayibha yokukhanya ye-intanethi yasekhaya okanye amajelo kamabonwakude. Nokuba ungomnye wabo baya kufumana iselfowuni entsha okanye uza kutshintsha iinkampani, Amaxabiso eorenji unyana Olona khetho lulungileyo ngokunxulumene nomgangatho kunye nexabiso. Ngokubanzi zibonelela ngezixa ze-ADSL okanye i-fiber optic ezihamba kunye nenqanaba lakho leselula. Ukuba ungomnye wabo babambeke kwitekhnoloji, ngokuqinisekileyo apha uya kufumana inqanaba elifanele wena.
Eminye imiba ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa ukhetha inqanaba leselula
Okokugqibela, ezinye izinto ezibalulekileyo xa ukhetha ireyithi yakho yeselfowuni zezi zilandelayo:
Ukufunda: kukho amaxesha apho kuya kufuneka ushukume kwaye ufuna ilizwi elilungileyo kunye nokusasazeka kwedatha yokuhamba kwedolophu kwizixeko ezikhulu. Khetha kakuhle ukugubungela umnxeba inkampani oyikhethileyo ukufumanisa ukuba ineziseko zayo kwindawo oza kuyisebenzisa kuyo kwaye usebenzise eli thuba.
Tsalela iinombolo zamanye amazwe: Kuxhomekeka kwinkampani kunye nenqanaba leselula olikhethileyo, ixabiso leminxeba phesheya lingahluka.
Enye yeempazamo eziphambili yile qesha ngaphezulu kokufuneka. Kulapho uyakubhatala into ongayisebenzisi. Ikwayimpazamo ukungazisebenzisi iinkonzo zasimahla okanye unyuselo olwenziwa ziinkampani ukuba zifumaneke.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungakhetha ngcono ukuba yeyiphi inqanaba leselula elikufanelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » yokuPhila » Te knoloji » Uyikhetha njani inqanaba lakho leselula